Cepodem (စီပိုဒမ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Cepodem (စီပိုဒမ်)
Cepodem (စီပိုဒမ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Cepodem (စီပိုဒမ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Cepodem (စီပိုဒမ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Cepodem® (cefpodoxime) သည် ပိုးသတ်ဆေး ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အသက်ရှုလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ အာင်္သီးရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ ကာလသားရောဂါ နှင့် နမိုးနီးယားအဆုတ်ရောင်ရောဂါ ၊ အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ
စသည့် ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သော ကူးစက်ရောဂါများအတွက်အများဆုံးအသုံးပြုကြသည် ။
Cepodem (စီပိုဒမ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Cepodem® (cefpodoxime) ကို ၁၂ နာရီခြား သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသောက်ပါ။ ဆေးပြားကိုသောက်လျှင် အစာနှင့် တွဲသောက်ခြင်းက ဆေးအာနိသင်ပို ထိရောက်စေပြီး ဆေးအရည်ဆိုလျှင် အစာနှင့် တွဲပြီးဖြစ်စေ ၊ အစာမရှိဘဲဖြစ်စေ သောက်နိုင်သည်။ ဆေးရည်ကို မသောက်မီ ဘူးကို သေသေချာချာလှုပ်သောက်ပါ။
ပိုးသတ်ဆေးသည် ခန္ဒါကိုယ်တွင်တစ်သတ်မှတ်တည်းရှိမှသာ အကျိုးအာနိသင် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်မှန်သောက်သုံးသင့်ပါသည်။
ဆေးကိုရောဂါလက္ခဏာသက်သာသော်လည်း သတ်မှတ်ထားသော ရက်ရောက်သည်အထိအသုံးပြုရပါမည်။ အချိန်မတိုင်မီရပ်လိုက်ပါက ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများ၏ ကြီးထွားမှုကို ပို၍များပြားလာနိုင်ပါသည်။
Cepodem (စီပိုဒမ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Cepodem® (cefpodoxime) ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Cepodem® (cefpodoxime)
ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Cepodem® (cefpodoxime) ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Cepodem® (cefpodoxime) ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Cepodem® (cefpodoxime) ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Cepodem (စီပိုဒမ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Cepodem® (cefpodoxime)ထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
Penicillin, Cephalosporin ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Cepodem (စီပိုဒမ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Cepodem (စီပိုဒမ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၏ လက္ခဏာများ (ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း)
ကျောက်ကပ်ရောဂါ၏ လက္ခဏာများ ခံစားရခြင်း (ဥပမာ- ဆီးပမာဏပြောင်းလဲသွားခြင်း)
မိန်းမကိုယ် တွင် မှိုရောဂါဖြစ်ခြင်း
သို့သော် မျက်စိအမြင်အာရုံပြောင်းလဲခြင်း၊ စကားလေးသွားခြင်း၊ စိတ်အာရုံထွေပြားခြင်းများ ဖြစ်ခြင်းတို့ သည် ရှားပါးသော ဆိုးကျိုးများဖြစ်သော်လည်း ဖြစ်လာလျှင် နီးစပ်ရာဆေးခန်းသို့ ချက်ချင်းသွားပြရပါမည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Cepodem (စီပိုဒမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Cepodemဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အောက်ပါဆေးများသည် ဓါတ်ပြုမှု ဖြစ်နိုင်သောဆေးများဖြစ်ပါသည်။
အစာအိမ်၏ အက်ဆစ်ဓါတ်ကို လျော့နည်းစေသော ဆေးများ (antacids, H2 blockers)
ပိုးကောင်အရှင်များဖြင့် ဖော်စပ်ထားသော ကာကွယ်ဆေးများ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Cepodem (စီပိုဒမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Cepodem® (cefpodoxime) က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Cepodem (စီပိုဒမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Cepodem® (cefpodoxime) ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် Cepodem® ဆေးသည် ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အစာအိမ်နှင့် အူရောင်ရောဂါရှိသူများတွင် ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Cepodem (စီပိုဒမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သောက်ဆေး 200 mg တနေ့ ၂ကြိမ် ၁၀ရက်
သောက်ဆေး 200 mg တနေ့ ၂ကြိမ် ၇ ရက်
နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးမရှိသော ဆီးလမ်းကြောင်း၊ သားအိမ်ခေါင်း နှင့် အမျိုးသမီးများတွင်ဖြစ်သော စအိုတဝိုက်ပိုူးဝင်ခြင်း အတွက် သောက်ဆေး 200 mg တကြိမ်သာသောက်ရန်
သောက်ဆေး 400 mg တနေ့ ၂ကြိမ်
လူများကြားမှ ကူးစက်သော နမိုးနီးယား အဆုတ်ရောင်ရောဂါ အတွက် သောက်ဆေး 200 mg တနေ့ ၂ကြိမ် ၁၄ ရက်
သောက်ဆေး 100 mg တနေ့ ၂ကြိမ်။ ရောဂါ ပြင်းထန်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး ၁၄ ရက်အထိသောက်နိုင်သည်။
သောက်ဆေး 200 mg တနေ့ ၂ကြိမ် ၁၀ ရက်
အရေပြား နှင့် တစ်သျူးများပိုးဝင်ခြင်း(နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးမရှိသော)
သောက်ဆေး 400 mg တနေ့ ၂ကြိမ် ၇-၁၄ ရက်
သောက်ဆေး 100 mg တနေ့ ၂ကြိမ် ၅-၁၀ ရက်
ကလေးတွေအတွက် Cepodem (စီပိုဒမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် အတွက် : သောက်ဆေး 200 mg တနေ့ ၂ကြိမ် ၁၀ရက်
အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် အတွက် : သောက်ဆေး 200 mg တနေ့ ၂ကြိမ် ၇ ရက်
အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် အတွက် : နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးမရှိသော ဆီးလမ်းကြောင်း၊ သားအိမ်ခေါင်း နှင့် အမျိုးသမီးများတွင်ဖြစ်သော စအိုတဝိုက်ပိုူးဝင်ခြင်း အတွက် သောက်ဆေး 200 mg တကြိမ်သာသောက်ရန်
အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် အတွက် : သောက်ဆေး 400 mg တနေ့ ၂ကြိမ်
အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် အတွက် : 5mg/ kg (အများဆုံး 200mg) တနေ့ ၂ကြိမ် ၅ ရက်
တနေ့လျှင် အများဆုံးပမာဏ 400 mg
အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် အတွက် : လူများကြားမှ ကူးစက်သော နမိုးနီးယား အဆုတ်ရောင်ရောဂါ အတွက် သောက်ဆေး 200 mg တနေ့ ၂ကြိမ် ၁၄ ရက်
အသက် ၂ လနှင့် ၁၂ နှစ်ကြား အတွက် : သောက်ဆေး : 5mg/ kg (အများဆုံး 200 mg) တနေ့ ၂ကြိမ် ၁၀ ရက်၊ တနေ့လျှင် အများဆုံးပမာဏ 400 mg
အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် အတွက် :သောက်ဆေး 200 mg တနေ့ ၂ကြိမ် ၁၀ ရက်
အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် အတွက် :သောက်ဆေး 400 mg တနေ့ ၂ကြိမ် ၇-၁၄ ရက်
အသက် ၂ လနှင့် ၁၂ နှစ်ကြား အတွက် : သောက်ဆေး : 5mg/ kg (အများဆုံး 100 mg) တနေ့ ၂ကြိမ် ၅-၁၀ ရက်၊ တနေ့လျှင် အများဆုံးပမာဏ 200 mg
အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် အတွက် :သောက်ဆေး 100 mg တနေ့ ၂ကြိမ် ၅-၁၀ ရက်
Cepodem (စီပိုဒမ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Cepodem® (cefpodoxime) ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၁၀၀ မီလီဂရမ် ဆေးပြား
Cepodem® (cefpodoxime) ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Cepodem®. https://www.drugs.com/dosage/cefpodoxime.html.Accessed November 5, 2016